အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ပြန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး …. - Linkardipa
Homeဲူူူူဲၾကားသ္ိသမွ်အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ပြန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး ….
အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ပြန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး ….
October 23, 2021 Linkardipa ဲူူူူဲၾကားသ္ိသမွ် Comments Off on အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ပြန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး ….
အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာပြီးမှ ပြန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး
“ သူပြန်လွတ်လာတော့ ညီမ ယောက္ခမကတော့ သူ့သားမျက်နှာကို မြင်လိုက်တယ်။ သူ့အမေကို ပြောတယ်။ သူ့နှာခေါင်းမှာ ဘုထွက်နေတယ်။ အဲဒီဘုထွက်နေတာက ဝက်ခြံမဟုတ်ဘူး။ သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုခံထားရလို့ ဘုထွက်နေတာ။ အဲဒီဘုကို သူ့ကိုခွဲပေးပါ။ သူနေလို့ မကောင်းဘူး။ အသက်ရှူလို့ မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်တဲ့။
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ လွတ်တယ်။ ၉ နာရီမှာ ပြန်ဖမ်းသွားတာ ။ ကျွန်မလေ ကျွန်မ အမျိုးသားမျက်နှာတောင် သေချာ မကြည့်လိုက်ရဘူး” ဟု ဇနီးဖြစ်သူ မယမုံဦးက ပြောသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အသက် ၃ဝ အရွယ် ကိုသက်ပိုင်ထွေးသည် ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရကာ အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည်မှာ ငါးလကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီက ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသူနှင့် တရား ရင်ဆိုင်နေရသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရာ ကိုသက်ပိုင်ထွေးလည်း လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ငရဲခန်းမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ကိုသက်ပိုင်ထွေးမှာ စစ်ကြောရေးတွင် ရရှိခဲ့သည့် အတွင်း၊ အပြင် ဒဏ်ရာများကို ဆေးကုသရန် မျှော်လင့်ထားသော်လည်း လွတ်မြောက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ၎င်း၏ နေအိမ်၌ ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လွတ်လာပြီး စစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ကိုသက်ပိုင်ထွေးအကြောင်းကို ၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူထံ သတင်းထောက် ဖူးအိအိနွယ်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာၿပီးမွ ျပန္ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး ….
အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာၿပီးမွ ျပန္ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး
“ သူျပန္လြတ္လာေတာ့ ညီမ ေယာကၡမကေတာ့ သူ႔သားမ်က္ႏွာကို ျမင္လိုက္တယ္။ သူ႔အေမကို ေျပာတယ္။ သူ႔ႏွာေခါင္းမွာ ဘုထြက္ေနတယ္။ အဲဒီဘုထြက္ေနတာက ဝက္ၿခံမဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ထုခံထားရလို႔ ဘုထြက္ေနတာ။ အဲဒီဘုကို သူ႔ကိုခြဲေပးပါ။ သူေနလို႔ မေကာင္းဘူး။ အသက္ရႉလို႔ မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး ေျပာတယ္တဲ့။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ လြတ္တယ္။ ၉ နာရီမွာ ျပန္ဖမ္းသြားတာ ။ ကၽြန္မေလ ကၽြန္မ အမ်ိဳးသားမ်က္ႏွာေတာင္ ေသခ်ာ မၾကည့္လိုက္ရဘူး” ဟု ဇနီးျဖစ္သူ မယမုံဦးက ေျပာသည္။
စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အသက္ ၃ဝ အရြယ္ ကိုသက္ပိုင္ေထြးသည္ ေရၾကည္အိုင္ စစ္ေၾကာေရးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္မွာ ငါးလေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေကာင္စီက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူႏွင့္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရသူ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ရာ ကိုသက္ပိုင္ေထြးလည္း လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ ငရဲခန္းမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ကိုသက္ပိုင္ေထြးမွာ စစ္ေၾကာေရးတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အတြင္း၊ အျပင္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ေဆးကုသရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ္လည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ၎၏ ေနအိမ္၌ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။
အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာၿပီး စစ္အုပ္စုတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ကိုသက္ပိုင္ေထြးအေၾကာင္းကို ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူထံ သတင္းေထာက္ ဖူးအိအိႏြယ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။